न्युयोर्कको सामुदायिक शिक्षा परिषदमा डा. अबिन ओझाको उमेदवारी – Durbin Nepal News
सरकारद्वारा खर्च कटौतीका पाँच प्रस्ताव
बजाङमा जीप दुर्घटनामा नौको मृत्यु
गुठी विधेयक फिर्ता लिन सांसदको आग्रह
न्युयोर्कको सामुदायिक शिक्षा परिषदमा डा. अबिन ओझाको उमेदवारी मेरो उमेदवारीले नेपाली, दक्षिण एशीयाली तथा अन्य विद्यार्थी तथा अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नेछ: प्राध्यापक ओझा
दूरबिन नेपाल १ बैशाख २०७६, आईतवार ०५:१५
दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क अप्रिल १३
न्युयोर्कको सामुदायिक शिक्षमा परिषद अर्थात कम्युनिटि एडुकेशन काउन्सिलमा नेपाली मुलका प्राध्यापक डा अबिन ओझाले उमेद्वारी दिएका छन । न्युयोर्क राज्यको शिक्षा विभाग अन्तर्गत डिष्ट्रिक ३० को शिक्षा परिषदको सदस्यमा डा ओझाले उमेदवारी दिंदै भनेका छन, “ मेरो उमेदवारीले नेपाली, दक्षिण एशीयाली तथा अन्य विद्यार्थी तथा अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । न्युयोर्कको सामुदायिक शिक्षा परिषदमा नेपालीको उमेदवारी सम्भवतः पहिलो पटक हो । नेपाली मुलका डा ओझा यदि शिक्षा परिषदमा निर्वाचित भएमा परिषदबाट मिल्ने सेवा सुविधाबाट नेपाली समुदाय लाभान्वित हुन सक्ने विस्वास गरिएको छ ।
नेपाल हुंदै अमेरिकासम्म लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध प्राध्यापक ओझाले न्युयोर्कको क्वीन्सका सामुुदायिक विद्यालयमा पनि करिब दुइ बर्ष अध्यापन गराइसकेका छन । हाल सिटी युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्क अन्तर्गतको योर्क कलेजमा प्राध्यापन गरिरहेका डा. ओझाले यदि न्युयोर्कको शिक्षा परिषदमा प्रतिनिधितव गरेमा अमेरिकामा, विशेष गरि न्युयोर्कमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । न्युयोर्क लगायत अमेरिकाभरी नै सामुदायिक शिक्षा परिषदलाई निकै सम्मानित रुपमा लिइन्छ । सामुदायिक शिक्षा परिषदले राज्यको शिक्षा विकास तथा योजना तर्जुमामा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । त्यस्तै परिषदले छात्रवृत्ति तथा राज्यबाट पाउने शैक्षिक सेवा सुविधामा छनौटकर्ताको भुमिका पनि खेलिरहेको छ । शिक्षा परिषदको निर्वाचनमा हरेक विद्यालयको शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष, कोषध्यक्ष, तथा सचिवले भोट हाल्न पाउनेछन । निर्वाचन मे २ देखि १४ तारिखसम्म अनलाइन भोटिङका आधारमा हुने छ ।
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०५:१५ मा प्रकाशित
अमेरिका । कोपा अमेरिका फुटबलमा डिफेण्डिङ च्याम्पियन चिलिले आमन्त्रित टोली जापानलाई ४ शून्यले स्तब्ध बनाएको छ । खेलको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएको चिलिलाई पहिलो हाफसम्म दबाबमा राख्न सफल भए पनि कमजोर.....
जाङ्बु शेर्पा -अमेरिका । मेक्सिको सिमानाबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने शरणार्थीको चाप बढ्दै गएपछि सिनेटर.....
नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ लाई आज अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा छाडिएको छ.....
Categories Select Category Breaking News (2,001) English (56) Slider (1,120) अन्तर्वार्ता (7) अमेरिका समाचार (544) अर्थ/वाणिज्य (590) आजको छापाबाट (64) आप्रबास मामिला (78) एनआरएन विशेष (153) कला/मनोरन्जन (216) खेलकुद (826) छोटकरी (78) ट्रेन्डिंग न्यूज् (2,078) प्रवास (399) फिचर (787) बिचार / ब्लग (1,356) बिज्ञान प्रबिधि (44) बिबिध (619) भिडियो न्यूज़ (30) मुख्य समाचार (4,058) यात्रा संस्मरण (5) राजनीति (1,911) रोचक (72) विचार ब्लग (214) विद्यार्थी बिशेष (37) विश्व समाचार (1,298) सफलताको कथा (33) समाचार (3,344) सम्पादकीय (4) साहित्य (124) स्वास्थ्य / शिक्षा (515)